रुसी सेना Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperरुसी सेना Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
युक्रेनमाथि भएको रुसी हमलामा युक्रेनको नेसनल गार्डका ५६० भन्दा बढी सेना मारिएका छन् । मारिनेमा हाल मारिओपोलको स्टिल कारखानामा रहेका रेजिमेन्ट पनि रहेका गार्डका नेताले जनाएका छन् । २४ फेब्रुवरीमा आक्रमण सुरु भएदेखि ५६१ जना मारिएकाबाहेक थप १६९७ सैनिकहरू घाइते भएका नेसनल गार्डका प्रमुख ओलेक्सी नाडटोचीले एउटा अनलाइन ब्रिफिङ भने । रुसी हमलामा मारिनेको संख्याबारे […]
हुनत युरोपमा वसन्त आउनै लागेकाे छ तर यस महाद्विपले भने शीतयुद्धको काठ्ठिने क्षणकाे अनुभव गर्दैछ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले युराेपकाे लामो शान्तिकाल समाप्त गरेकाे छ भने शान्ति कायम राख्ने युरोपियन सुरक्षा व्यवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ । पक्कै पनि यो अन्त्य एक्कासी भएको हैन । युक्रेनमा गत फरबरी २४ मा दसौं हजार सैनिक पठाउनुभन्दा करिब […]
विस्फोटनका कारण क्षतिग्रस्त भएको रुसी नौसेनाको एक महत्त्वपूर्ण पानीजहाज डुबेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्क्भा नामक उक्त लडाकू पानीजहाजलाई आफूले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको युक्रेनले जनाएको थियो । रुसी सेनाको ’शक्तिको प्रतीक’ रुसी भाषामा मस्कोलाई भनिने मस्क्भा नाम दिइएको सो लडाकू पानीजहाज वास्तवमा रुसी सेनाको शक्तिको एक जल्दोबल्दो प्रतीक नै थियो । ५१० […]
युक्रेनमा रमाजान कसरी मनाइरहेका छन् ?
“जब तपाईँ निरन्तर साइरनको आवाज सुनिरहनु हुन्छ र जब तपाईँ वरपर ध्वस्त विद्यालय, अस्पताल र घर देख्नुहुन्छ तब कसरी सामान्य हुन सक्नुहुन्छ ?” नियारा मामुटोभाले प्रश्न राखिन् । “मृत शरीर र जलेको घर देख्दा म बिरामी महसुस गर्छु । यो अवस्था निकै तनावपूर्ण छ। यो रमजान पीडाले भरिएको छ ।” नियारा टर्किक जातीय समुदायकी […]
युद्ध यसरी पनि रोक्न सकिन्छ
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको पूर्व प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. आन्द्रेई लारिओनोभले पश्चिमी मुलुकहरूले रुसी तेल र ग्यास खरिद गर्न बन्द गरे युक्रेन युद्ध रोकिने बताएका छन् । उनले रुसी ऊर्जामाथि ‘वास्तविक प्रतिबन्ध’ लगाउनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । डा. लारिओनोभले अन्य मुलुकहरूले आफ्ना ऊर्जा प्रयोग कटौती गर्ने भनेर दिएको चेतावनीलाई रुसले गम्भीर रूपमा नलिएको पनि बताएका […]
युक्रेनी नगर बुचामा भएको आमहत्याको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले त्यहाँ छरिएका कङ्कालको दृश्य निराशाजनक भएको बताएका छन् । जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन र नेटोका नेताहरूले स्तब्ध भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने युरोपेली आयोगकी प्रमुखले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धहरू लगाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । भिडिओमा सर्वसाधारणहरूको शव सहर र पछाडिका […]
युक्रेनका विदेशमन्त्रीले मंगलबार रुससँग शान्तिवार्ताका लागि गएका अधिकारीहरूलाई केही नखान र केही नछुन चेतावनी दिएका थिए । जसबारे अहिले सबैतिर व्यापक चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न स्रोतहरूबाट आएको खबरअनुसार यसअघि मार्चमा युद्धको सुरुवातमा भएको शान्तिवार्ताका लागि गएका चेल्सी फुटबल क्लबका मालिक रोमन अब्राहिमोभिचसहितको युक्रेनी शान्तिवार्ता टोलीलाई रुससँगको बैठकमा ‘पोइजनिङ’ अर्थात उनीहरूमाथि विषाक्त केमिकल प्रयोग भएको […]
वसन्त ऋतुको आगमनसँगै युक्रेनको दक्षिणी भूभाग माइकोलेभमा घाम चर्किन थालेको छ । तर अरु बेला घमाइलो मानिने यही मौसममा तापमान बढ्दै जाँदा अहिले त्यहाँको हावामा मृत्युको गन्ध मात्र आइरहेको छ । ठाउँठाउँमा थुप्रिएका मृत रुसी सेनाहरुको शवले अवस्था भयावह बनाइदिएको उक्त क्षेत्रका गर्भनर भिटली किम बताउँछन् । उनले सर्वसधारणहरुलाई ती शवहरु संकलन गर्नमा मद्दत गर्न […]
एक महिनाअघि युक्रेनमा आक्रमण गरेको रुसले आफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन गर्ने सङ्केत दिँदै अब पूर्वी क्षेत्रलाई “मुक्त” बनाउन केन्द्रित हुने घोषणा गरेको छ । रुसको रक्षा मन्त्रालयले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनको युद्ध क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको दाबी गरेको छ । रुसको आक्रमण युक्रेनका केही सहरहरू कब्जा गर्ने र युक्रेनको सरकार ढाल्न […]